Ilaina ny Medical Travel Insurance | Save A Train
Home > Travel Europe > Ilaina ny Medical Travel Insurance
(Last Nohavaozina: 25/06/2021)
Ny mampientam-po ampahany nandeha any ivelany no unpredictability ny traikefa. Rehefa mandeha any an-tany hafa, dia ho hita amin'ny kolontsaina samy hafa, Fikirana, ary traikefa. Na dia ny sasany fikarohana, ianao Azo antoka fa ho voasambotra tampoka ny sasany izay mahita. Indrisy, Tsy rehetra sendra ny tsy ampoizina ianao dia mety ho tsara fanahy, ary satria ianao vakansy tsy midika afa-miala ianao hanisy ratsy.
Mety tsy te-hino fa ireo fahoriana mety hitranga aminao, fa tokony ho vonona ny mety ho izay, na ny havan-tiana, dia mitaky fitsaboana raha mbola lavitra ny an-trano. Na dia toy ny tsotra toy ny chipping ny nify, spraining ny kitrokeliny, midina amin'ny tazo, na marary fo, mandray ny fitsaboana tokony Mba tsy ho tahaka mora tahaka ny dia ho any amin'ny United States.
Izany dia satria ny ankamaroan'ny fiantohana ara-pahasalamana nentim-paharazana dia tsy haharitra drafitra fandrakofana mihoatra noho izay mitranga amin'ny American tany. Midika izany fa afaka ho eo ny lelam-pitana ny an'arivony dolara ny vola lany ara-pitsaboana ho anao ny fiahiana mandray ampitan-dranomasina. Izany no antony tsy dia lavitra tokony ho tsy misy Travel fiantohana ara-pahasalamana. Ireo drafitra manokana ho any an-toerana izay misy ny fandrakofana dia tsy, antoka fa ianao dia ho afaka ny mankafy ny diany tsy manahy momba ny ampoizina mihitsy nitranga.
Ho an'ny bebe kokoa fampahalalana momba ny dia fiantohana ara-pitsaboana ary nahoana ianao no tokony hieritreritra ny hahazo an'io, jereo ny mpitari-dalana ao ambany.
Nahoana no Medical Travel Insurance hevitra tsara?
• Traveling ny firenena avy any ivelany dia afaka mampiditra maro loza ara-pahasalamana. Ohatra, ny kalitaon'ny rano Mety tsy ho toy izany koa, mitarika ho aretina lehibe. Samy hafa dia mety hampikorontana ny toetr'andro fisiany mialoha ny toe-piainana, toy ny aretim-po na allergie na tsy fahazakana, mahafoy anao ratsy ampy fitaovana hiatrehana ny zava-misy.
• Na dia efa manana fiantohana ara-pahasalamana, mety tsy manarona anareo ivelan'ny Etazonia. Midika izany fa misy aretina na ny ratra anao hiaina mandritra ny diany any ivelany mety amin'ny tena ambony mitsabo.
• Raha toa ianao ka mitsidika ny lavitra anisan'izao tontolo izao, ary mila fitsaboana haingana, dia mety tokony nafindra tany amin'ny hopitaly. Raha tsy misy fiantohana araka ny tokony, izany dia afaka lany an'aliny dolara teo amboniny ny fandaniana mifandraika hafa.
• Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho ilaina mba Travel fiantohana ara-pahasalamana nandritra ny fisian'ny ny diany. Ohatra, mpitsidika an'i Rosia, Kiobà, sy ny firenena Schengen tao amin'ny Vondrom-paritra ao amin'ny EU Aoka izy ireo fandrakofana.
• Na dia Travel ara-pahasalamana mikasika ny mety ho tena sarobidy, izany matetika mahatonga ho latsaky ny 10 isan-jaton'ny vokatra rehetra Travel fiantohana novidina avy mpandeha, raha hoe somary lafo.
Ahoana no Travel Miaro Anao ny Medical Insurance
• fitsaboana Travel fiantohana mitovy amin'ny fitsipika voalohany indrindra Travel fiantohana ny politika ao fa tsy manome fandrakofana ny vola lany mikasika ny hanafoanana, fahatarana, na fanelingelenana.
• Amin'ny Travel fiantohana ara-pahasalamana, dia afaka manana fandrakofana ao amin'ny hetsika ara-pahasalamana tsy nampoizina ny vonjy taitra. Mety miainga avy ny nify nahasimatsimahana na bout ny sakafo fanapoizinana ho amin'ny fiainana-nandrahona ratra sy ny aretim-po.
• Iray amin'ireo tombontsoa ireo Kilonga politika dia ireo manome anao 24/7 fiteny maro fanohanana mba hanampy anao mandrindra amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana tehinareo ho eny an-tany hafa.
• Ireo politika matetika manome fandrakofana Fa inona moa amin'ny ankapobeny heverina fototra ara-pitsaboana fandaniana. Anisan'izany ny mitsidika efitra vonjy taitra, serivisy famindrana, ary fitaterana vola nanameloka hanatratra ny mety pitsaboana.
• Ny tena mahazatra drafitra iray manarona diany, fa izy ireo koa dia azo vidiana handrakotra vanim-potoana, raha mbola 12 volana. Maharitra fandrakofana fitsaboana ho an'ireo izay mandeha matetika, na ho an'ny fotoana maharitra ihany koa dia afaka ho nividy teo an mitombo tsikelikely isam-bolana.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Download eto ny PDF fa ity lahatsoratra ity izay nomena hamonjena A Train avy Senior Services ny Illinois
#fiantohana #travelinsurance Travel
Jenn Nanomboka tao amin'ny orinasa Insurance in 2007. Tao anatin'ny taona voalohany, izy no iray amin'ireo ambony 10 ny mpamokatra ao amin'ny firenena miaraka amin'ny iray amin'ireo lehibe indrindra sy be mpampiasa indrindra fantatra sampan-draharaha misahana fiantohana. Olona ny in Illinois ary mitohy ny mifantoka amin'ny asany, family, ary lavitra. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
How to get To Venise By Train Fa Paka